घर युरोपियन स्टार Laurent Koscielny Childhood Story Plus Untold Biography Facts
एलबीले पूर्ण स्टोरीको एक रक्षात्मक प्रतिभा प्रस्तुत गर्दछ जुन नामले चिनिन्छ; "बोसीसीली"। हाम्रो लरेन्ट Koscielny बचपन स्टोरी प्लस अनलल्ड जीवनी तथ्यहरूले तपाईंलाई बचाउनु पर्ने समयका अचम्मका घटनाहरूको पूर्ण खातासम्म सम्म पुग्छ। विश्लेषणमा प्रसिद्धि, पारिवारिक जीवन र उनको बारेमा धेरै बन्द र अन-पिच तथ्याङ्कहरू (सानो-ज्ञात) भन्दा पहिले आफ्नो जीवन कथा समावेश गर्दछ।
हो, सबैले आफ्नो आक्रामक रक्षा क्षमताको बारेमा चिन्ता छ तर कमलले हाम्रो लरेन्ट Koscielny जीवनीको बारेमा विचार गर्दछ जुन धेरै रोचक छ। अब थप adieu बिना, सुरु गरौं।
Laurent Koscielny Childhood Story Plus Untold जीवनी तथ्य -बाल्यकाल
Laurent Koscielny Tulle मा सितंबर 10 को 1985th दिन, फ्रान्स को लिमसिन क्षेत्र को तीसरा सबै भन्दा ठूलो शहर र फुटबल खेल्न को लागि एक गलत ठाँउ हो, जो उनको नागरिकहरु को बिरुद्ध भारी ढेर भयो। लरेन्ट Koscielny मा श्री र श्रीमती बर्नार्ड Koscielny को जन्म भएको थियो जो एक साथ उनको छोरा संग पोलिश राष्ट्रीयताहरु।
लरेन्ट केन्द्रीय फ्रान्समा एक स्थानमा ट्युले मा खनन परिवारमा हुर्कियो त्यहाँ एक खुट्टामा फुटबल हुँदा खालीपन समाप्त हुन्छ। उहाँको बचपन कथा रोचक छ, यदि असामान्य छैन - यसको सानो केटाले एक धानको साथ धनको कथामा जसले असाधारण प्रतिभाको साथ आशिष् पायो। Laurent तिनको बचपन समयको दौडान उनीहरूको सपनाहरू सत्यको लागि एक ठुलो दृढता थियो। उनको महत्वाकांक्षाहरू मात्र एक गुप्त कल्पना थिएन। फुटबलको लागि लरेन्टको समानता, तिनको बुबा भाइलाई धन्यवाद दिनुभएकोमा धन्यवाद, तर यो खेलमा कहिल्यै बनाएन।
उनको शब्दहरुमा ..."एक पेशेवर फुटबलरको रूपमा खेल्ने विचार मात्र मात्र एक सपना थियो, एक प्रकार का काल्पनिक मेरो उमेरको हरेक बच्चा आशा गर्न सक्थे। त्यस समयमा, मैले सोधेको मात्र कुरा फुटबल खेल्न, खेल्न र फेरि खेल्न थालें। आफैलाई मजा लिदै, मेरा साथीहरूसँग र उनीहरूको गुणस्तरको समय साझेदारी गर्दै। फुटबल खेल्ने सबै मेरो बारे चिन्तित थियो, जस्तै मेरो उमेरका धेरै बच्चाहरु।
Laurent Koscielny Childhood Story Plus Untold जीवनी तथ्य -सारांशमा क्यारियर
लरेन्टले 2004 मा आफ्नो क्यारियर ग्वाइङ्प्याम्पको साथ शुरु गरेकी थिइन् Didier Drogba र फ्लोरेन्ट मालाउवा। उनले दाहिने हातको रूपमा आफ्नो व्यावसायिक क्यारियर सुरू गरे र उनलाई तीन बल लगाउन बलियो बनाइदिए। लरेन्टले धेरै काम, बलिदान, र कठोर लागू गरे जसले उनलाई गुआङ्पाम्प वरिष्ठ दबाबको लागि प्रोत्साहित गर्यो जसमा उनले पूर्णब्याकमा परिवर्तन गरे। लरेन्टको रूपमा 18 वर्षको उमेरमा उनले आफूलाई र मेरो परिवारको लागि पैसा बचत गर्न थाले। पछि तिनले फ्रान्स ट्राफिक राइनको स्थानमा टूर र लोरेन्टका लागि खेलेका थिए, पछि पछि फ्रांसीसी शीर्ष फ्लाइट फुटबलको पदोन्नति गर्न मद्दत गर्यो।
यो लरेन्टको आक्रामक रक्षात्मक शैली हो जसले आर्सेसनलाई आकर्षित गर्यो जसले7जुलाई 2010 मा साइन इन गर्यो। शस्त्रागार बोर्डले सम्झौता गर्यो तर आर्सन वेंजरलाई अन्तिम अनुमोदन दिन सकेन किनभने दक्षिण अफ्रिकामा रहेको थियो र आफ्नो मोबाइल फोन घरमा छोडिदिए। त्यो समय थियो किसिसेलेनीले एक हलचलको कारणले गर्दा फ्रान्सेली समाचार पत्रहरूले रिपोर्ट गरे कि उनी आफ्नो हस्तक्षेप टोलीको बिना प्रशिक्षकको रूपमा प्रशिक्षित गर्न र वेन्जरले फाइनलमा सम्झौता गरे। पछि उनले फाइनल गरे र फिलिपको नम्बर6शर्टलाई फर्काएका थिए, पहिले फिलिप्पी पठाउनेको पहेंलो भयो, जसले फुलहममा सारियो।
Laurent Koscielny Childhood Story Plus Untold जीवनी तथ्य -सम्बन्ध जीवन
त्यहाँ एक कुरा हो कि कामको हरेक राम्रो टुक्रालाई सही स्थान र सही समयमा सही व्यक्ति चाहिन्छ। निस्सन्देह, लरेन्ट Koscielny को पिच व्यक्ति एक बन्द पिच जीवन छ जुन सुन्दर र पूरै द्वारा पूरै गरिएको छ। लामो समय सम्म प्रेमिका क्लेयर बीउउडौइन।
दुवै प्रेमीहरू 2015 मा उपस्थित हुँदा धेरै आर्सेल्यान्ड र फ्रांसीसी टोलीका साथ विवाह गरे।
यद्यपि फ्रान्सेली प्रेसले बढी चासो देखायो रेफेल वरेनको विवाह जो एउटै दिन भयो। कोसीसीनीले फ्रान्स प्रेसलाई आफ्नो विवाह समारोहको तस्बिर लिन अनुमति दिएनन्। हामी मात्र अनुमान लगाउन सक्छौं कि Koscielny को अनलाइन फोटो पोस्ट गर्न को लागी केहि को रूप मा आफ्नो तस्वीरहरु लाई बेसार गर्न को लागी योजना बनाई को लागी Bacary Sagna को पत्नी Ludivine देखि आयो।
लरेन्ट र क्लेयरको नाममा दुई प्यारी बच्चाहरू छन्; म्याना र नूह कोसेलीनीले आफ्नो पितासँग चित्रण गरेका थिए। "मेरो छोराछोरीले मलाई जीवनमा अगाडी बढ्न मद्दत गर्यो"। भन्छन्, लरेरेन्ट।
उनीहरूको प्रशिक्षण सत्र पछि, लरेन्टले स्कूलमा आफ्ना छोराछोरीहरू उठ्न र उनीहरूको पत्नीले कामबाट फर्केपछि दोपहरको अन्त्यसम्मसम्म हेर्न रुचाउँछन्।
Laurent Koscielny Childhood Story Plus Untold जीवनी तथ्य -पारिवारिक तथ्यहरू
आफ्नो परिवार संग शुरू गर्न कोसिसेनी को दादा पोलिश थियो। उनी पोलिश खनिजको रूपमा काम गर्न उत्तरी फ्रान्समा बसाइन्। दुर्भाग्यवश, समय भन्दा धेरै र तिनका परिवारका अन्य सदस्यहरूले पोलिश भाषा र जराहरू गुमाए।
लरेन्टका पिताले म्यान्चेस्टर बन्नु अघि धेरै क्लबहरूको लागि फ्रांसीसी फुटबलको चौथो विभाजनमा खेल्नुभयो। Koscielny ले आफ्नो पिता, बर्नार्डलाई उहाँलाई पृथ्वीमा राख्नुपर्ने र उहाँलाई सधैं सम्झेर मद्दत गर्नको लागि श्रेय गरेको छ र उहाँ कसरी उनीहरूको जरामा सत्य रहनु पर्दछ। उनको पिता उनको लागि एक ठूलो सम्पत्ति थियो जो कसैले राम्रोसँग बुझ्न फुटबलको संसार। कोसेसीले यसो भन्छिन् ..."मलाई थाहा थियो कि के भयो भने मैले मेरो खुट्टा भरी राखेन। सौभाग्यवश, उहाँले सधैं मेरो आँखा राख्नुभयो र सधैं प्रस्तुत रहनु भएको थियो मलाई बनाउन चाहने छनौटहरूमा। मलाई लाग्छ म धेरै भाग्यशाली छु। मैले मेरा आमाबाबु र मेरा भाइबहिनीहरू दुवै एक राम्रो शिक्षा पाए। तिनीहरू सबैले मलाई आवश्यक मूल्यहरू सिकाउँथे। अनि आज, यो मेरो पालो मेरो बच्चाहरु लाई संचारित गर्दछ। "
Laurent Koscielny को आमा मा आमा समर्थन प्रदान गर्न सधैं उनको पछि रहेको छ। र आज पनि, उनी आफ्नो जीवनमा धेरै उपस्थित छन्। उहाँले यसलाई राख्नुहुन्छ: "उहाँ र म सधैं मेरो क्यारियर र जीवनमा एक आवश्यक व्यक्ति भएको छ: एक अभिभावक स्वर्गदूत"। उहाँसँग एक फुटबल गर्दै भाइ छ जो उनको तुलनामा 10 वर्ष भन्दा पुरानो हो र एक पटक शौकिया लीगहरूमा खेल्नुभयो।
Laurent Koscielny Childhood Story Plus Untold जीवनी तथ्य -व्यक्तिगत जीवन
Laurent Koscielny आफ्नो व्यक्तित्व को निम्नलिखित विशेषता छ।
लोरेंट बल: उहाँ वफादारी हुनुहुन्छ (क्लब र पत्नी दुवै), आरक्षित, विश्लेषणात्मक, मेहनती र धेरै व्यावहारिक।
Laurent's Weaknesses: शाइन, सामानमा चिन्तित हुन सक्दछ, आत्म र अरूको प्रायः महत्वपूर्ण छ र सबै काम हो र कुनै खेल छैन।
कुन लरेन्टले मनपर्छ: उहाँ जनावरहरू, स्वस्थ खाना, किताबहरू, प्रकृति र सामान्य शुद्धता मनपर्छ।
कुन लरेन्टले नमनपराउँछ: रुद्रता, मदतको लागि सोध्नु र केन्द्रिय चरण लिनु।
लरेन्ट कुनै व्यक्ति हो जसले सधैं सानो विवरणमा ध्यान पुर्याउँछ र मानवताको गहिरो भावनालाई उसलाई सजिलै व्यक्तिलाई तपाइँले थाहा पाउनुहुनेछ। जीवनको उहाँको व्यावहारिक दृष्टिकोणले यो सुनिश्चित गर्दछ कि मौकाको लागि केही पनि बाँकी छैन। लरेन्ट कुनै व्यक्ति हो जसले अक्सर गलत बुझ्न सक्छ, किनकि उसले व्यक्त गर्ने क्षमताको कमी छैन, तर किनकि उसले आफ्नो भावनालाई मान्य, सत्य, वा पनि प्रासंगिक रूपमा स्वीकार गर्दैन जब कारणको विरोध हुन्छ।
Laurent Koscielny Childhood Story Plus Untold जीवनी तथ्य -मित्रता
उनको शस्त्रागार क्यारियर को शुरुवात यति राम्रो थिएन। यद्यपि, यो लामो समय अघि लागेन आर्सेन वेंजर उनीहरूको शारीरिक कठोरताप्रति प्रेममा परे र त्यस पछि देखि, लरेन्टले आफैंले पौष्टिक प्रबन्धकलाई आदी बनाएको छ।
Laurent Koscielny Childhood Story Plus Untold जीवनी तथ्य -Q & A सत्र
लरेन्टले केही क्यूए प्रश्नहरूको बारेमा जान्नको लागि उत्तर दिए। तलका तल प्रश्नहरू र यसको प्रतिक्रियाहरू छन्।
को के तपाईं खेलमा सामना गर्नु पर्ने सबैभन्दा कठिन खेलाडी हो?
डोगाबा, बिना हिचकिचाहट।
कहाँ / कुन खेलले तपाईको सबैभन्दा ठूलो झटका अनुभव गर्यो?
फ्रान्समा यूरोको अन्तिम। हाम्रो लागि एक कठिन समय थियो। किनकि यो फ्रान्समा सबैको अपेक्षा गरिएको घटना थियो। मलाई लाग्छ कि समग्रमा यो सफलता थियो, तर हारको साथमा धेरै पीडादायी थियो। त्यहाँ सधैं साहसिक भावना जस्तै यो एक साहसिक परिष्करण को रूप मा यस तरिका मा छ।
जब तपाईं क्षेत्र मा बाहिर जान्नुहुन्छ, के तपाईं के बारे मा सोच्नुहुन्छ?
जब म एक क्षेत्रमा जान्छु, म यसको बारेमा धेरै सोच्दैन, एक पटक हामी हस्त-बाँध समारोहको साथमा गरिरहन्छौं, म मेरो खेलमा मात्र र मेरो खेलमा ध्यान दिन प्रयास गर्दछु, म आफैलाई गर्न चाहन्छु, म्याचको दौडान, म सबैभन्दा राम्रो नतिजा पाउन मेरो टोलीको सबै भन्दा राम्रो दिन प्रयास गर्ने प्रयास गर्दछु।
तथ्य जाँच गर्नुहोस्: हाम्रो लरेन्ट Koscielny बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्यहरू पढ्नको लागि धन्यवाद। मा LifeBogger, हामी शुद्धता र निष्पक्षताको लागि प्रयास गर्छौं। यदि तपाइँ केहि कुरा देख्नुहुन्छ जुन यस लेखमा सही देखिएन, कृपया तपाईंको टिप्पणी राख्नुहोस् वा हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् !.
फ्रेन्च मौसा डेम्बेले बचपन कहानी अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू
vannyhenrico - फेब्रुअरी 16, 2020
vannyhenrico - फेब्रुअरी 15, 2020 0
फेब्रुअरी 28, 2018